စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုထိတွေ့စဉ်လူတို့၏အရေပြားစာနာမှုအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၊ လိင်ကွဲပြားမှု (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
တပ်ဦး Physiol ။ 2014; 5: 111 ။
မတ်လ 19, 2014 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fphys.2014.00111
Rachael Brown က1,* နှင့် Vaughan G. အ Macefield1,2
ဒါကြောင့်လူသိများသည်နေချိန်မှာစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal အသားအရေစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (SSNA) အပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်း, သွပ်ရည်စိမ်အသားအရေတုံ့ပြန်မှု (GSR) စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများစဉ်အတွင်း SSNA အတွက်တိုးမြှင့်အခြမှအများဆုံးအသုံးများ parameter သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီက SSNA effector-ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတုံ့ပြန်မှုထက်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏တစ်ဦးထက်ပိုထိခိုက်မခံတဲ့အတိုင်းအတာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များနိုင်ငံတကာကနေကြားနေသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုအားပေးနေစဉ်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, SSNA နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်း, အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ချွေးလွှတ်ပေးရေးကဲ့သို့သောအခြားဇီဝကမ္မ parameters တွေကိုများ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ် အကျိုးသက်ရောက်စေရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) ။ SSNA အတွက်အပြောင်းအလဲများ 20 ဘာသာရပ်များ (10 ယောက်ျားနှင့် 10 အမျိုးသမီး) တွင် microneurography သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အပြုသဘော-တရားစွဲဆို (erotica) သို့မဟုတ်အဆိုးတာဝန်ခံပုံရိပ်တွေ (ဖြတ်တောက်မှု) ၏လုပ်ကွက် 15 images နဲ့တည်မြဲ2မိ်တစ်ဦးချင်းစီပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူ, ကြားနေပုံရိပ်တွေတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအောက်ပါတစ်အမည်ခံကျပန်းဖက်ရှင်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ erotica နှင့်ဖြတ်တောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ပုံများတိုးဖြတ်တောက်မှုကြည့်ရှုအမျိုးသမီးများအတွက် erotica နှင့်ပိုမိုကြည့်ရှုအထီးအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, SSNA အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးစေ၏။ SSNA အတွက်တိုးမကြာခဏချွေးလွှတ်ပေးရန်နှင့် cutaneous vasoconstriction နှင့်အတူ coupled ကြသည် ဟူ. ၎င်း, သို့သော်ဤအမှတ်အသားများကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်များထက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောမနှင့်အစဉ်မပြတ် SSNA တိုးနှင့်ကိုက်ညီကြဘူး။ ကျနော်တို့အပြုသဘော-စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘော-တရားစွဲဆိုစိတ်ခံစားမှုပုံများ, သေးသောလိင်ကွဲပြားမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ SSNA တိုးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။
keywords: အသားအရေစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့, လိင်ကွဲပြားမှု, ချွေးလွှတ်ပေးရန်, microneurography
လူ့စိတ်ခံစားမှုရှည်လျားအဆိုပြုထားမြောက်မြားစွာသီအိုရီများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့အသုံးပြုနည်းလမ်းများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးနှင့်အတူလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနအပေါ်အခြေခံစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အစောဆုံးသီအိုရီတစ်ခုမှာစိတ်ခံစားမှုဇီဝကမ္မဖြစ်ရပ်များ၏ရလဒ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းသောဂျိမ်းစ်-Lang သီအိုရီဖြစ်၏ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဝမ်းနည်းခံစားရ သောကြောင့်, သူတို့ပတ်လည်၌အခြားလမ်း (ယာကုပ်, ငိုခြင်းနှင့်မဟုတ် 1884; Lang, 1885) ။ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များအပေါ် causation ၏မေးခွန်းအဖြစ်အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့အသိပညာ, Golightly (သီအိုရီအကြီးအကျယ်စွန့်ပစ်ခဲ့တာကိုဆိုလိုသထားပါတယ်, 1953) ။ ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (ပေးစေလိုပါတယ်) ကထိန်းချုပ်ထားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏လှုပ်ရှားမှုမြားတှငျပွောငျးလဲစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်အပြောင်းအလဲများကို (Lacey နှင့် Lacey အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုယခုရှင်းပါတယ်ပေမယ့်, စိတ်ခံစားမှုသီအိုရီတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရှိပါတယ်ဆက်လက်တည်ရှိပါဘူး 1970), ထိုကဲ့သို့သော cutaneous ဖလပ် (vasodilatation) အခါ, လူမှုရေးအရရှက် blushes သူတစ်ဦး၏မျက်နှာ၌ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအဖြစ်။
ထိုပေးစေလိုပါတယ်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သည်ယခုအခါကျယ်ပြန့်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုများစဉ်အတွင်းလေ့လာရသေးအငြင်းပွားဖွယ်ရာယခုထိဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ (Hare et al ၏တည်ပြီးသတ်တယ်ရလဒ်ကိုနှင့် ပတ်သက်. တည်ရှိနေကြသည်။ , 1970; Callister et al ။ , 1992; lang et al ။ , 1993; Fox က, 2002; Ritz et al ။ , 2005; Carter က et al ။ , 2008; ဘရောင်း et al ။ , 2012) ။ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတည်ရှိမယ့်ဘုံအမြင်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုသိနားလည်နိုင်စွမ်းဖြစ်တွေ့ရှိနှင့်ယောက်ျားပေါင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှု (Whittle et al နှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုကြုံနေရနှင့်အတူအမှန်စင်စစ်စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားရှိ၏။ , 2011), သေးလိင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေစူးစမ်းအနည်းငယ်သာစာပေလည်းမရှိ။ ဒါကြောင့်စိတ်ခံစားမှု dysregulation မမှန် (Gater et al ၏ပျံ့နှံ့မှုအတွက်လေးနက်လိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်လူသိများသည်နေစဉ်။ , 1998), အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များမှလေးစားမှုနဲ့အတူလိင်ကွဲပြားမှု (Bradley et al စူးစမ်းကြသောသူတို့လေ့လာမှုများအဘို့ရောထွေးရလဒ်များကိုရှိပါတယ်။ , 2001; McRae et al ။ , 2008; မိုးခုံး et al ။ , 2010; Lithari et al ။ , 2010; Bianchin နှင့် Angrilli, 2012).
ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှု (ဘရောင်း et al အပေါ်ကိုချဲ့ထွင်ဖို့ပဲ။ , 2012) လိင်ကွဲပြားမှုကြားနေသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-တရားစွဲဆိုအမြင်အာရုံ stim ၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက်uli ။ စိတ်ခံစားမှု arousal evoking by ့မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သော Stroop အရောင်-စကားလုံးစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂဏန်းသင်္ချာအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်မွေးရာပါအဆိုပါသိမြင်ဘက်လိုက်မှုကိုရှောင်ရှား။ ကြားနေသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-တရားစွဲဆိုဘာသာရပ်များဖေါ်ပြခြင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့သည်အသားအရေစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (SSNA) ၏တိုက်ရိုက် microneurographic အသံသွင်းအသုံးပြုထိုကဲ့သို့သောသွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်း, အသက်ရှူနှင့်အထူးသဖြင့်ချွေးထွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် cutaneous သွေးစီးဆင်းမှုအဖြစ် effector ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတုံ့ပြန်မှုဤနှိုင်းယှဉ်ချင်ခဲ့တယ် အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏ -a အသုံးများအစုံ (Lang et al နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) မှပုံရိပ်များ။ , 1997) ။ ဒါဟာ (ကြက်သီး) ပေါ်လာဖို့စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုချွေးလွှတ်ပေးရန်ကျလာသောနှင့်အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, အအေးချွေးထွက်) ကိုလျှော့ချကြောင်း, အဖြစ်ဆံပင်အကြောင်းမရှိမျက်မြင်လက်တွေ့သိသာဖြစ်၏ ဤအ effector-ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတုံ့ပြန်မှု cutaneous vasoconstrictor, sudomotor နှင့် pilomotor အာရုံခံ၏ coactivation ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ cutaneous vasoconstrictor နှင့် sudomotor အာရုံခံ၏ Single-ယူနစ်အသံသွင်းခဲ့ကြပေမယ့်, (Macefield နှင့် Wallin ဖျော်ဖြေ 1996, 1999), မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်းသော်လည်း, SSNA ၏တိုက်ရိုက်အသံသွင်းပုံမှန်အားဖြင့် Multi-ယူနစ်အသံသွင်း-ဒီအရေပြားဧရိယာမှစုစုပေါင်းစာနာထွက်သွားတိုင်းတာနိုင်သည့်အားသာချက်ကမ်းလှမ်းဖြစ်ကြသည်။ ချွေးလွှတ်ပေးရန်မကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်လေ့လာမှုများကာလအတွင်းစာနာထွက်သွားအတွက်တိုးမြှင့်အခြမှအသုံးပြုသွားမည်, ကြှနျုပျတို့ SSNA နှင့်ချွေးလွှတ်ပေးရန်အကြားဆက်စပ်မှုဆင်းရဲသောငါတို့ယခင်လေ့လာမှုကနေကိုသိနေသည်နှင့်အမျှလေ့လာမှု၏အခြားရည်ရွယ်ချက်မှာနောက်ထပ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်အယူအဆခိုင်မြဲဖို့ဖြစ်တယ် SSNA ၏အသံသွင်းပြီးတော့တစ်ဦးတည်းဖြန့်ချိချွေးကအရေပြားမှစုစုပေါင်းစာနာထွက်သွား၏တစ်ဦးထက်ပိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းတာသည်။
လေ့လာရေးတစ်ခုချင်းစီဘာသာရပ်သူတို့ကအကြောင်းကြားခဲ့ပေးလေ့လာမှုမှာပါဝင်မတိုင်မီအကြောင်းကြားရေးသားထားသောသဘောတူညီချက် ပေး. , သူတို့အချိန်မရွေးစမ်းသပ်မှုကနေဆုတ်ခွာနိုင်အားကြားပြောလေ၏ 10 ယောက်ျားနှင့် 10 အမျိုးသမီးကျန်းမာဘာသာရပ်များ (အသက် 20-46 နှစ်) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ သူတို့အချို့သောစိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရတော့မှာပါ။ အဆိုပါလေ့လာမှုများအနောက်တိုင်းဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်ရဲ့လူ့သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီများ၏ခွင့်ပြုချက်အောက်မှာကောက်ယူနှင့်ဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များအလျားလိုက်ထောက်ခံခြေထောက်နှင့်အတူတစ်ဦး Semi-recumbent အနေအထားအတွက်ကုလားထိုင်အတွက်အငြိမ့်လျောင်းတော်မူ။ စောင့်ရှောက်မှုအလိုအလျောက် arousal တုံ့ပြန်မှု minimize တစ်ဦးအေးဆေးနှင့်တိတ်ဆိတ်ပတ်ဝန်းကျင်သေချာစေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အရေပြားမှစာနာထွက်သွားအပူချိန်အပြောင်းအလဲများမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သကဲ့သို့တစ်ဦးကအဆင်ပြေအပူချိန်လည်း, (22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ECG (0.3-1.0 kHz), ရင်ဘတ်ပေါ် Ag-AgCl မျက်နှာပြင်လျှပ်နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသော2kHz မှာနမူနာများနှင့်ကွန်ပျူတာ-based data တွေကိုရှာမှီးခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ် (PowerLab 16SP Hardware နဲ့ LabChart7software ကိုသုံးပြီးအခြားအဇီဝကမ္မ variable တွေကိုနှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ် ; ADInstruments, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ) ။ သွေးဖိအားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ချောင်း-သွေးခုန်နှုန်း plethysmography (Finometer Pro ကို, Finapres ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ, အဆိုပါနယ်သာလန်) ကို အသုံးပြု. နှင့် 400 Hz မှာနမူနာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက်ရူအကာ (DC-100 Hz) ရင်ဘတ်ရစ်ပတ်နေတဲ့ strain-gauge transducer (Pneumotrace, UFI, Morro ဂလားပင်လယ်အော်, CA, USA) ကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသားအရေအသှေးကို volume ထဲမှာအပြောင်းအလဲများတစ်ဦးလက်ချောင်းများ၏ pad ပါရန်လျှောက်ထားတဲ့များကို piezoelectric transducer မှတဆင့်စောင့်ကြည့်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, လွှဲခွင်ဟာသိသိတိုင်းတာခြင်းကို အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့တာကဒီ signal ကိုသွေးခုန်နှုန်းကနေ LabChart7ဆော့ဖ်ဝဲပါရှိပါတယ်။ သွေးခုန်နှုန်းလွှဲခွင်ထဲမှာတစ်ဦးကကျဆင်းခြင်းအသားအရေသွေးစီးဆင်းမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းညွှန်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရေပြားအလားအလာ (0.1-10 Hz; BioAmp, ADInstruments, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ) ကလက်ဖဝါးနဲ့ dorsum ဖြတ်ပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်; အသားအရေအလားအလာပြောင်းလဲမှုများချွေးလွှတ်ပေးရန်ရောင်ပြန်ဟပ်။
ဘုံ peroneal အာရုံကြောတစ်ခုအထီးကျန်စဉ်ဆက်မပြတ်-လက်ရှိအရင်းအမြစ် (stimulus အထီးကျန်မှုတွေ, ADInstruments, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ) ကနေတဆင့်တစ်ဦးမျက်နှာပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေး (3-10 MA, 0.2 ms, 1 Hz) မှတဆင့် palpation နှင့်အပေါ်ယံလျှပ်စစ်ဆွအားဖြင့် fibular ဦးခေါင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး insulator တွင်လည်းအဖြိုက်နက် microelectrode (FHC, မိန်း, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ကိုအာရုံကြောသို့ percutaneously ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အားနည်းလျှပ်စစ်ပဲမျိုးစုံ (0.01-1 MA, 0.2 ms, 1 Hz) ပို့နေစဉ်အတွင်းကိုယ်တိုင်အာရုံကြောတစ် cutaneous fascicle ဆီသို့ချီတက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး uninsulated subdermal microelectrode မြေပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်ခြေထောက်ပေါ်ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်မျက်နှာပြင် Ag-AgCl လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ intraneural ဆွ 0.02 Ma မှာသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွရေစီးကြောင်းမှာကြွက်သား Twitch မပါဘဲ paraesthesiae evoked လျှင်တစ်ဦးက cutaneous fascicle ကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦး cutaneous fascicle ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပြီးတာနဲ့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (10 ရရှိ amplified ခဲ့သည်4နိမ့်သောဆူညံသံ၊ လျှပ်စစ်အားဖြင့်အထီးကျန်သော headstage (NeuroAmpEx, ADInstruments, Sydney, Australia) ကို အသုံးပြု၍ 0.3-5.0 kHz bandpass ။ အဆိုပါ fascicles ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုနိမ့်တံခါးခုံ mechanoreceptors- fascicular innervation နယ်မြေအတွင်းအရေပြားရိုက်နှက် activating အားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။ SSNA ၏အလိုအလျောက်ပေါကျကှဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်အထိ microelectrode အစွန်အဖျား၏အနေအထားထို့နောက်ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိခဲ့သည်။ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် SSNA ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုသည်အကြောင်းအရာအားအရှိန်ပြင်းပြင်းရှူရန်တောင်းခံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာရပ်၏မျက်လုံးများကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်နှာခေါင်းပေါ်ရှိအသာပုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (10 kHz sampling) ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်နှင့်စာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု RMS- လုပ်ငန်းများ၌ (အမြစ်ယုတ်စတုရန်း, ရွေ့လျားပျမ်းမျှအချိန် - စဉ်ဆက်မပြတ် 200 ms) signal ကိုအဖြစ်ပြသခြင်းနှင့် LabChart7software ကိုသုံးပြီးကွန်ပျူတာအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်တိုက်ရိုက်စာနာသောအာရုံကြောအသွားအလာနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ချွေးထွက်မှုတို့ကိုတိုင်းတာခဲ့ကြသော်လည်း SSNA ပေါက်ကွဲခြင်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်နှင့်ခြေထောက်အာရုံကြောနှစ်ခုလုံးတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းထပ်တူထပ်မျှပုံစံဖြင့်ပေါ်လာသည်၊ arousal လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် vasoconstrictor နှင့် sudomotor စနစ်များ၏ activation (Bini et al ။ , 1980).
စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုနိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ် (IAPS ထံမှစံပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Lang et al, 1997) ။ စနစ်များတွင်အသုံးပြုသောတစ်ခုချင်းစီရုပ်ပုံကျယ်ကျယ် valence (အလွန်အမင်းအနုတ်လက္ခဏာကနေအလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့်အထိယင်း၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှု,) နှင့် arousal အဘို့စမ်းသပ် rated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုမြင့်မားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာ valence နှင့်အတူဖြတ်တောက်မှု၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် evoked စဉ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမြင့်မားအပြုသဘော valence ratings နှင့်အတူ erotica ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် evoked ကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှစ်ဦးစလုံးစုံကိုမြင့်မားတဲ့ arousal ratings ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလိုအလျောက် SSNA နဲ့သင့်လျော် intraneural site ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ဘာသာရပ်ဖြေလျော့ပေးခြင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့တစ် 2-မိကျိန်းဝပ်ကာလ, ထိုဘာသာရပ် 30 မိ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း 8 ကြားနေပုံများ,4s ကိုရေရှည်တစ်ခုချင်းစီကို image ကို, ပြသခဲ့သောအောက်ပါမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် 15-မိတည်တံ့2ပုံရိပ်တွေ (erotica သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ်စေ) ၏ဘလောက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ erotica သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်မှု၏ရုပ်ပုံများကိုကြားနေပုံရိပ်တွေတစ် 2-မိပိတ်ပင်တားဆီးမှုအောက်ပါစိတ်ခံစားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေတစ်ခုချင်းစီ 2-မိပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်တကွ, ဘာသာရပ်များမှမသိသောအချိန်မှာအမည်ခံကျပန်းဖက်ရှင်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်3ကြားနေပုံရိပ်တွေ၏လုပ်ကွက်ကွားနှင့်အတူဖြတ်တောက်မှု၏ erotica နှင့်3လုပ်ကွက်၏6လုပ်ကွက်ရှုမြင်ကြသည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များအတွက် IAPS ပုံရိပ်တွေရင်တော့မှားမယ်ခဲ့ကြသည်။
ဆက်တိုက် 1-s ကိုကျော်စာနာပြီးတော့ Activision နေတာများ၏အရေအတွက်စုစုပေါင်းနှင့်အတူ coupled ယုဂ်, တိုင်းတာ SSNA ၏အထွတ်အထိပ် amplitude, တစ်ဦးချင်းစီ 2-မိပိတ်ပင်တားဆီးမှုကျော်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအာရုံကြောအချက်ပြမှု၏အာရုံအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူ coupled အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း, SSNA ၏တစ်ဦးချင်းစီပြီးတော့ Activision နေတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အခြေခံသည့် RMS အ-လုပ်ငန်းများ၌ signal ကိုများနှင့်အခြေခံအပေါ်ကအများဆုံးလွှဲခွင်တွက်ချက်ကွန်ပျူတာများတွင်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးကစည်းချက်-စည်းချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးချင်းစီ 2-မိပိတ်ပင်တားဆီးမှုကျော်နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအား, အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှု, အရေပြားအလားအလာများနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှုနှုန်းအဘို့ကောက်ယူခဲ့ပြီးတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီဘလောက်တစ်ခုယုတ်တန်ဖိုးကိုဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ 2-မိပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအတွက်တစ်ဦးကယုတ်အုပ်စုတစ်စုတန်ဖိုးကိုပြီးတော့တွက်ချက်နိုင်နှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာအပြောင်းအလဲများကိုဆင်းသက်လာ။ အကြွင်းမဲ့အာဏာအသားအရေအလားအလာပြောင်းလဲမှုများနှင့်အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှုဟာတစ်ဦးချင်းစီ၏ပျမ်းမျှကျိန်းဝပ်တန်ဖိုးပုံမှန်ရှိကြ၏။ တစ်ဦးချင်းစီ 2-မိပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအပြောင်းအလဲများအပြင်, ကြားနေဖို့ပုံမှန်ဆွေမျိုးပြောင်းလဲမှုများကျိန်းဝပ်ကာလအဘို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်နှင့်အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာပုံရိပ်တွေ-The 100% ဒါထို့ကြောင့်, ရုပ်ပုံများ၏အခြားလုပ်ကွက်များအတွက်တန်ဖိုးထားအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကြားနေပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ပျှမ်းမျှခွဲခြားခဲ့သည် ကြောင်းတန်ဖိုးဆွေမျိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအဖြစ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအုပ်စုများသို့ data တွေကိုခွဲဝေပြီးနောက်, ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှအချက်အလက်ပေါ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက် Newman က-Keuls စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူဒွန်တွဲသုံးယောက်နှိုးဆွသောအခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးချင်းစီဇီဝကမ္မ parameter သည်၏ကှဲလှဲ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲဆောင်ရွက်ချက်များအားသုံးသပ်ခြင်းသည်, အချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Mac အတွက် Prism ကို 5, GraphPad ဆော့ဝဲ Inc မှ, အမေရိကန်နိုင်ငံ) အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တွဲ t-tests အဆိုပါ erotica နှင့်ဖြတ်တောက်မှုဒေတာအစုံအဘို့နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအုပျစုမြားအဘို့အထူးထူးအပြားပြားဇီဝကမ္မ parameters တွေကိုအတွက် (ကြားနေဖို့ပုံမှန်) ဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှု၏အဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05 ။
erotica နှင့်ဖြတ်တောက်မှု၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ 21 နှစ်အရွယ်အထီးကနေစမ်းသပ်မှတ်တမ်းများ, ပုံထဲမှာပြသနေကြသည် Figure1.1။ ဒါဟာ erotica ဖို့တုန့်ပြန်ကြီးသော်လည်း SSNA ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်းတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုန်ကြမ်း signal ကို (အာရုံကြော) နှင့်ဖြတ်တောက်မှု (က) သို့မဟုတ် erotica (ခ) ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုနေစဉ် 21 နှစ်အရွယ်အထီးဘာသာရပ်ထံမှရရှိသော RMS အ-လုပ်ငန်းများ၌ဗားရှင်း (RMS အအာရုံကြော), အဖြစ်တင်ဆက်အသားအရေစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှတ်တမ်းများ,။ အဆိုပါစာနာသတိပြုပါ ...
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအတူတကွအုပ်စုဖွဲ့သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှု (4), နှငျ့အညီ, သွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်း, အသက်ရှူ, cutaneous သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ချွေးလွှတ်ပေးရန်အကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ဖိုးများကိုနှိုင်းယှဉ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု-Charge ရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအပြောင်းအလဲများပြသ ကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ကြွင်းသောအရာမှာ။ ဒီသာပေါကျကှဲအကြိမ်ရေအဘို့ခဲ့ပေမယ့် SSNA သို့သော် (erotica သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်မှု၏ရုပ်ပုံများကိုဖြစ်စေကြည့်ရှုသောအခါငြိမ်ဝပ်ရာနှင့်ကြားနေအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့တယျp <0.05), လွှဲခွင်ကွဲ။ သွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်စုစုပေါင်း SSNA ကွဲထွက်မှုနှုန်းများအတွက်ပကတိတန်ဖိုးများ (ပုံများမရှိ)၊ ကြားနေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေစဉ်နှင့် erotica သို့မဟုတ် mutilation ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအခါပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Figure2.2။ SSNA တွင်တွေ့မြင်ခံရသည့်တစ်ခုတည်းသောသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုလွှဲခွင် (erotica ကွဲနှင့်အတူအလားတူပင်ကြားနေဖို့ပုံမှန်ဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုအလားတူရလာဒ်များပြသ p = 0.044; စက်ဆုတ်ခြင်း p = 0.028) နှင့်ကြိမ်နှုန်း (erotica p <0.0001; ရွံရှာဖွယ် p = 0.002) အပြုသဘောနှင့်အဆိုး-Charge နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း။
လေးပါးသောအခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးသွေးဖိအား (က) ၏±အရှေ့တောင်အကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ဖိုးများ, နှလုံးခုန်နှုန်း (ခ), အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှုန်းကို (C) နှင့်အရေပြားစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏စုစုပေါင်းပေါကျကှဲ count က (ဃ) ကိုဆိုလိုတာ။ မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်မရှိ, စာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုသည့် SSNA မှလွဲ. တည်ရှိ ...
ဘာသာရပ်များယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးသို့ကွဲကွာခဲ့ကြသည့်အခါ, သို့သော်, ဒါကြောင့်စာနာ reactivity ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်း, cutaneous သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ချွေးလွှတ်ပေးရေးအုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုပြသနေစဉ်, SSNA ပေါကျကှဲလွှဲခွင်နှင့်ကြိမ်နှုန်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ SSNA များအတွက်အပြုသဘော-Charge ပုံရိပ်တွေ (ကြည့်ရှုနေစဉ်အမျိုးသားများသာသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်ကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာရရှိသော SSNA အဆင့်ဆင့်မှနှိုင်းယှဉ်လွှဲခွင်ပြင်းစွာတိုက်p = 0.048), အမျိုးသမီးကိုသာအပျက်သဘော-Charge ပုံရိပ်တွေ (တစ်သိသိသာသာတိုးခဲ့စဉ်p = 0.03) ။ အပြုသဘောပုံရိပ်တွေ (ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း SSNA ပေါကျကှဲအကြိမ်ရေအဘို့, ထပ်အထီးအုပ်စုသည်သာသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်p = 0.0006) ။ သို့သော်အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စုသည်ယခုအခါ (အပြုသဘောနှစ်ဦးစလုံးမှသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်p = 0.0064) နှင့်အဆိုး-Charge ပုံရိပ်တွေ (p = 0.0005), အဖြတ်တောက်မှုပုံရိပ်တွေဖို့တိုး erotica ကိုထက်ကြီးပေမယ့်။ အဆိုပါကြားနေခွအေနအေမှပုံမှန် SSNA အတွက်ဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကိုကွဲအရေအတွက်နှင့်လွှဲခွင်, ပုံထဲမှာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအပြနေကြသည် Figure33.
±အရှေ့တောင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအုပ်စုများသို့ခွဲခြားသည်, ကျိန်းဝပ်ကာလ, အပြုသဘောပုံများ, နှင့်အနုတ်လက္ခဏာပုံရိပ်တွေအဘို့, အသားအရေစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကွဲလွှဲခွင် (က, C ကို) နှင့်ကြိမ်နှုန်း (B: D) တွင်ကြားနေခွအေနအေမှပုံမှန်အားလုံးပြောင်းလဲဆိုလို။ Erotica ...
စုစုပေါင်းပေါကျကှဲအဖြစ် SSNA-တိုင်းတာတဲ့အခါမှသာသော်လည်းဒီလေ့လာမှုအဖြစ်ကောင်းစွာကွဲလွှဲခွင်-ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာအဖြစ်မှတ်, လိင်ကွဲပြားမှုစိတ်ခံစားမှု-တရားစွဲဆိုအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုဖို့စာနာတုံ့ပြန်မှုအတွက်တည်ရှိကြောင်းပြသထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်း, ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူကဲ့သို့သောအခြားဇီဝကမ္မ parameters တွေကိုအတွက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုအုပ်စုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှု, အပြုသဘောနှင့်အဆိုး-Charge နှစ်ဦးစလုံးပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း SSNA အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးပြသနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိလေ့လာမှု erotica ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအမြိုးသမီးဖြတ်တောက်မှု၏ပုံရိပ်များဖို့ သာ. ကြီးတုန့်ပြန်ခဲ့စဉ် SSNA အတွက်တိုး, ယောက်ျားများတွင်ပိုမိုသိသာဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒီလေ့လာမှု SSNA အတွက်တိုးမြှင့်အမြင်အာရုံစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှု (မသက်ဆိုင် valence ၏) က evoked နိုင်အတည်ပြုနေစဉ်, ကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. တုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်စာနာထွက်သွား၏သွယ်ဝိုက်အမှတ်အသားများမှာရှာဖွေနေသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုသိလို့မရပါ။ ထိုမှတပါး, cutaneous သွေးစီးဆင်းမှုသို့မဟုတ်ချွေးလွှတ်ပေးရန်အတွက်မျှသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်ကြောင်း cutaneous စာနာလှုပ်ရှားမှု၏သွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာထက်အရေပြားမှစာနာထွက်သွား၏အကဲဖြတ်အတွက်တိုက်ရိုက်အာရုံကြောအသံသွင်း၏ သာ. sensitivity ကိုအလေးပေးသည်။
ဘုံယူဆချက်စိတ်ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (အမျိုးသမီးအမျိုးသားများထက်ပိုတုံ့ပြန်သိနားလည်နိုင်စွမ်း, သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူဖော်ပြကြသည်) ရှိပါတယ်ကျင်းပနေစဉ်, အထောက်အထားများစွာ Self-အစီရင်ခံ data တွေကိုတဆင့်ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ ဒါဟာပင်ကိုယ်မူလဇီဝကမ္မသုတေသနမှတဆင့်, ဒီမြင်ကွင်းကိုအမှန်တရား (Kring နှင့်ဗန်ဒါဘစ်လ်အတွက်အချို့သောအခြေခံရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသည်, သာမကြာသေးမီကဖြစ်ပါသည်, 1998; Bradley et al ။ , 2001) ။ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှလိင်ကွဲပြားမှုနှင့်ပေးစေလိုပါတယ်တုံ့ပြန်မှုပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းဒီနှေးကွေးပေါ်ပေါက်ရေးရှိနေသော်လည်းသပိတ်မှောက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောသက်သေအထောက်အထားများကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများမှတဆင့်တိုင်းတာရှိမရှိ, ဆဲရှိသေး၏။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်း, ထိုကဲ့သို့သောချွေးလွှတ်ပေးရန်အဖြစ်, စာနာ activation ၏သွယ်ဝိုက်တိုင်းတာအသုံးပြုခြင်းအချို့သောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောတွေ့ရှိချက်လြှော့သိရသည်။ Bradley et al ။ (2001), အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုယောက်ျား erotica ၏ဓာတ်ပုံများကိုမှအမျိုးသမီးများ၏ထက်ပိုမိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်ပြသတွေ့ရှိခဲ့ Kring နှင့်ဗန်ဒါဘစ်လ် (နဲ့အတူ1998) အမျိုးသမီးတွေနှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအသုံးအနှုန်းတွေရန်, ယောက်ျားထက် ပို. ဖော်ပြခဲ့ဖြစ်လေသည်။ သို့သျောလညျး, (Bianchin နှင့် Angrilli စဉ်2012) သာယာသောအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အမျိုးသမီးအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ် deceleration တွေ့အဘယ်သူမျှမလိင်ကွဲပြားမှုအသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင် Lithari et al ။ (2010) အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် EEG အလားအလာ (ERP) ဆန်းစစ်နှင့်အမျိုးသမီးအမျိုးသားများမှဆွေမျိုးမနှစ်မြို့ဖွယ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော arousal လှုံ့ဆော်မှုမှ ERP amplitude ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အားကောင်းတုံ့ပြန်သော်လည်း, အသားအရေ conduction တုံ့ပြန်မှုမရှိလိင်ကွဲပြားမှုကိုတွေ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော်အရမ်းထိုကဲ့သို့သောချွေးလွှတ်ပေးရန်အဖြစ်သွယ်ဝိုက်တိုင်းတာအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်စေပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ၎င်းတို့စပ်ကြားခွဲခြားလို့မရဘူးတွေ့ရှိခဲ့ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်နောက်ထပ်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှက်ကြောက်ဖို့, Vrana နှင့် Rollock (2002) နှစ်ဦးစလုံးအဖြူနှင့်အနက်ရောင် (အာဖရိကန်အမေရိကန်) သင်တန်းသားများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာ, သာဖြူသင်တန်းသားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလက်ရှိလေ့လာမှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းကလေ့လာမှု (ဘရောင်း et al အတွက်အလားအလာလူမျိုးရေးကွဲပြားမှုကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပေမယ့်။ , 2012), သင်တန်းသားများအပေါငျးတို့သကော့ကေးဆပ်, မြေထဲပင်လယ်သို့မဟုတ်အာရှကြ၏ အဘယ်သူမျှမဌာနေသို့မဟုတ်အာဖရိက-အမေရိကန်ခဲ့ကြသည်။
မကြာသေးမီအချိန်များမှာတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging ၏အသုံးပြုမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အကဲဖြတ်ရန်တစ်ဦး technique ကိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးတွေ့ရှိချက်အစဉ်အမြဲတသမတ်တည်းမရဖြစ်ကြပြီးကန့်သတ်လေ့လာပေမယ့် (Wrase et al တည်ရှိကြဘူး။ , 2003; Schienle et al ။ , 2005; McRae et al ။ , 2008; မိုးခုံး et al ။ , 2010) ။ အထီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတွင်ပိုမိုထိရောက်ဖြစ်ထင်နေစဉ်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, လိင်ကွဲပြားမှုအတွက်ထွန်းသစ်စပုံစံများ Whittle et al (အမျိုးသမီးအမျိုးသားများထက် ပို. စိတ်ခံစားမှုသိနားလည်နိုင်စွမ်းနှင့်ပိုမိုအကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုကြုံနေရဖြစ်တွေ့ရှိထားကြောင်းနှင့်အတူရှိနေပါသည်။ , 2011) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ reactivity ကိုနှင့်အတူ, ကယျြပွနျ့စှာယောက်ျားလိင်အမျိုးသမီးထက်လှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုများမှာ, ဤနှစ်ဦးစလုံး neuroimaging လေ့လာမှုများအဖြစ်ဇီဝကမ္မလေ့လာမှုများ (Hamann et al အစီရင်ခံခဲ့လက်ခံသည်။ , 2004; Allen က et al ။ , 2007) ။ သို့သော်ဤကြားမှကျယ်ပြန့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလိင်ကွဲပြားမှုဟာအပြုသဘော-စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘော-Charge ပုံရိပ်တွေအကြားမြင်ကြခဲ့ကြသည်ပေမယ့်။ သူကညံ့ဖျင်း, မှတ်တမ်းတင်နေသည်ကိုလက်ခံလျက်ရှိ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အပြုသဘော-စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘော-Charge ပုံရိပ်တွေအကြား SSNA တုံ့ပြန်မှုမရှိကွဲပြားခြားနားမှုအထက်တွင်-အမျိုးသမီးမှတ်ချက်ချသေး-အဖြစ်ရှိခဲ့သည်အထီးခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကိုပိုမိုတုံ့ပြန်စဉ်အခါ, ဖြတ်တောက်မှုပုံရိပ်တွေမှအထီးထက် သာ. ကြီးမြတ်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် microneurography မှတဆင့်ရရှိသော SSNA ၏တိုက်ရိုက်တိုင်းတာ, သုံးပြီးဖွင့်တစ်ဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောနှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအား, ချွေးလွှတ်ပေးရန်နှင့်အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှုအဖြစ်သွယ်ဝိုက်အစီအမံ, အသုံးပြု. ထက်ပိုမိုပြည့်စုံသောနိဂုံးရလဒ်များကိုလိုက်လျောနိုင်သောအကြံပြုထားသည်။
ရိုထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထားနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖြစ် variable တွေကိုအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်အလားအလာန့်အသတ်ဖြစ်သွားကြသည်နေစဉ်, ဘာသာရပ်များအများစုလက်ရှိလေ့လာမှုမှာမပါဝင်မှသာ IAPS ပုံရိပ်တွေရင်တော့မှားမယ်ရှိနသောသူတစ်ဦးချင်းစီ၏ပါဝင်သည်ပေမယ့် ဒါ့အပြင်ဓါတ်ပုံတွေကိုအလားတူတုံ့ပြန်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရဲ့အဆုံးမှာရှိပါတယ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်သည့်အခါအများစုအကြောင်းအရာမရှိပါအဆိုပါ erotica အားဖြင့်စေတနာစိတ်ပျက်လျက်ရှိနှင့်တကွ, erotica ပုံရိပ်တွေဆီသို့အတော်လေးကြားနေခံစားခဲ့ရစဉ်အားလုံးဘာသာရပ်များသည်ဖြတ်တောက်မှုပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခံရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ရိုကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ဦးချင်းစီအကြားတုံ့ပြန်မှုများ၏ဒီဂရီအပေါ် impact ဖို့အလားအလာရှိသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေ၏ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုလေ့လာနေ၏နောက်ထပ်န့်အသတ်စိတ်ခံစားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေများ၏လုပ်ကွက်ကြား၌ကြားနေပုံရိပ်တွေ၏အသုံးပြုမှုသည်။ ကြားနေပုံရိပ်တွေ၏ရှေ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဟာစိတ်ခံစားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှု၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆိုင်သောနေရာများတွင်အသုံးပြုကြသည်နေစဉ်, အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြားနေပုံရိပ်တွေဖို့တုန့်ပြန်ကြည့်ရှုအားပေး image ကိုပေါ် မူတည်. အခြားသူတွေ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလေယာဉ်ပျံ၏ပုံရိပ်တစ်ခုထက်ပိုများနိုင်ပါသည် ပျံတစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့သောသူတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်) ။ ရာသီစက်ဝန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်စဉ်အတွင်းဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကွဲပြားမှုတွေ့ပါပြီအဖြစ်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့သကဲ့သို့, ရာသီစက်ဝန်းနဲ့စာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, စိတ်ခံစားမှုလေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်အခြားအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် (စတိန်း et al ။ , 2005; Carter က et al ။ , 2013) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအဘို့သို့သော်ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရနှင့်အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်မှုမသက်ဆိုင်သည့်ရာသီစက်ဝန်း၏အဆင့်အတူတူတင်ပြကြသည်; ကကောင်းစွာအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်ရာသီအနေအထားကိုများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရကျိုးနပ်ပေမည်။
အရေပြားမှညွှန်ကြား postganglionic စာနာ axon မှတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ intraneural microelectrodes အသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့လိင်ကွဲပြားမှု erotica နှင့်ဖြတ်တောက်မှု၏ပုံရိပ်များဖို့စာနာအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်တည်ရှိကြဘူးကောက်ချက်ချပြသခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောကွဲပြားခြားနားမှုအသားအရေစာနာထွက်သွား-ချွေးလွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ် cutaneous သွေးစီးဆင်းမှု-အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောနှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအားများနှင့်အသက်ရှူကဲ့သို့သောအခြားသွယ်ဝိုက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၏သွယ်ဝိုက်အစီအမံမှတဆင့်သိလို့မရပါ။
ဤလုပ်ငန်းကိုသြစတြေးလျအမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ချက်အချို့အတွက် Elie Hammam နှင့် Azharuddin Fazalbhoy ပေးအကူအညီမှကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အယ်လန်အမ်, Emmers-Sommer TM, D'Alessio D. , Timmerman L. , Hanzel အေ, Korus J. (2007) ။ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအကြားလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်မှု - meta-analysis ကို အသုံးပြု၍ စာပေအကျဉ်းချုပ်။ Commun ။ Monogr ။ 74, 541-560 10.1080 / 03637750701578648 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bianchin အမ်, Angrilli အေ (2012) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: တစ် psychophysiological လေ့လာမှု။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 105, 925-932 10.1016 / j.physbeh.2011.10.031 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bini G. အ, Hagbarth K.-E. , Hynninen P. , Wallin BG (1980) ။ ဒေသဆိုင်ရာတူညီနှင့် thermoregulatory vaso- နှင့် sudomotor သေံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဂျေ Physiol ။ 306, 553-565 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bradley MM, Codispoti အမ်, Sabatinelli ဃ, Lang PJ (2001) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု II ကို: ရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု 1, 300-319 10.1037 / 1528-3542.1.3.300 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘရောင်း R. ဂျိမ်းစ် C. , Henderson L. , Macefield V. (2012) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအမှတ်အသားများ: စိတ်ခံစားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းလူသားတွေအတွက်အသားအရေစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ တပ်ဦး။ Physiol ။ 3: 394 10.3389 / fphys.2012.00394 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Callister R. , Suwarno NO, တံဆိပျကို DR (1992) ။ စာနာလှုပ်ရှားမှုလူသားတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများစဉ်အတွင်းတာဝန်အခက်အခဲနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအမြင်ကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ဂျေ Physiol ။ 454, 373-387 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Carter က JR, Durocher JJ, Kerns RP (2008) ။ အာရုံကြောနှင့်လူသားတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol ။ 295, R1898-R1903 10.1152 / ajpregu.90646.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carter က JR, ဖူဆိုးကျိုး, Minson မှန် CT, Joyner MJ (2013) ။ premenopausal အမျိုးသမီးသားအိမ်သံသရာနှင့် sympathoexcitation ။ သွေးတိုး 61, 395-399 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.112.202598 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မိုးခုံး G. အ, Schulz L. , Bottger အမ်, Grossmann အေ, Hauenstein K. , Wirtz PH သည်, et al ။ (2010) ။ စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 31, 758-769 10.1002 / hbm.20903 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fox ကအီး (2002) ။ စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ processing: စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အသိပညာ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2, 52-63 10.3758 / CABN.2.1.52 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gater R. , Tansella အမ်, Korten အေ, Tiemens BG, Mavreas VG, Olatawura MO ကို (1998) ။ ယေဘုယျအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု setting များကိုထဲတွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်၏ထောက်လှမ်းအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု - ယေဘုယျအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်ကမ္ဘာတွင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကပူးပေါင်းလေ့လာမှုအနေဖြင့်အစီရင်ခံစာ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 55, 405-413 10.1001 / archpsyc.55.5.405 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စတိန်း JM, Jerram အမ်, Poldrack R. , et al Ahern တီ, ကနေဒီ DN, Seidman LJ ။ (2005) ။ ဟော်မုန်းသံသရာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးအမျိုးသမီး arousal circuitry modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 9309-9316 10.1523 / JNEUROSCI.2239-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Golightly C. (1953) ။ အဆိုပါဂျိမ်း-Lang သီအိုရီ: တစ်ယုတ္တိ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာ။ ဖီလို။ သိပ္ပံ။ 20, 286-299 10.1086 / 287282 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hamann အက်စ်, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန် K. (2004) ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ နတ်။ neuroscience ။ 7, 411-416 10.1038 / nn1208 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယုန် R. , Wood ကကေ, ဗြိတိန်အက်စ်, Shadman ဂျေ (1970) ။ အမြင်အာရုံဆွ affective မှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု။ Psychophysiology 7, 408-417 10.1111 / j.1469-8986.1970.tb01766.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျိမ်းစ်ဒဗလျူ (1884) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဘာလဲ? စိတ်ထဲ 9, 188-205 10.1093 / စိတ်ထဲ / os-IX.34.188 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kring လေး, ဗန်ဒါဘစ်လ် U. (1998) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: စကားရပ်, အတွေ့အကြုံနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 74, 686-703 10.1037 / 0022-3514.74.3.686 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lacey JI, Lacey ဘီစီ (1970) ။ တချို့ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ-ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် interrelationships, Emotion ၏ဇီဝဆက်စပ်မှုရှိအမဲရောင် P. , အယ်ဒီတာ ed ။ (နယူးယောက်, NY: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း;), 205-227
lang P. , Bradley အမ်, Cuthbert ခ (1997) ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိခိုက်စေရုပ်ပုံစနစ် (IAPS): နည်းပညာဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်, အကျိုးသက်ရောက်စေ Ratings အဖွဲ့။ Gainsville, FL: Emotion နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏လေ့လာမှုအဘို့အ NIMH ရေးစင်တာ
lang PJ, Greenwald MK, Bradley MM, Hamm သည် AO (1993) ။ ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်: အကျိုးသက်ရောက်စေမျက်နှာ, visceral နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Psychophysiology 30, 261-273 10.1111 / j.1469-8986.1993.tb03352.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lang C. (1885) ။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှု: တစ် psychophysiological လေ့လာမှု။ စိတ်ခံစားမှု 1, 33-90
Lithari C. , Frantzidis, CA, Papadelis C. , Viva AB, Klados MA, Kourtidou-Papadeli C. , et al ။ (2010) ။ အမျိုးသမီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါသလား arousal နှင့် valence အတိုင်းအတာကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးက neurophysiological လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Topogr ။ 23, 27-40 10.1007 / s10548-009-0130-5 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Macefield VG, Wallin BG (1996) ။ လူ့ချွေးဂလင်းထောက်ပံ့တစ်ခုတည်းစာနာအာရုံခံ၏ဥတုအပြုအမူ။ ဂျေ Auton ။ အာရုံကြော။ Syst ။ 61, 277-286 10.1016 / S0165-1838 (96) 00095-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Macefield VG, Wallin BG (1999) ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်လူ့အသားအရေဖို့တစ်ခုတည်း vasoconstrictor နှင့် sudomotor အာရုံခံ၏နှလုံးမော်ဂျူ။ ဂျေ Physiol ။ 516, 303-314 10.1111 / j.1469-7793.1999.303aa.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McRae K. , Ochsner KN, Mauss ခလရ, Gabrieli JJD, စုစုပေါင်း JJ (2008) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: သိမြင် reappraisal တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Group မှလုပ်ငန်းစဉ်။ Intergroup ဆက်ဆံရေး။ 11, 143-162 10.1177 / 1368430207088035 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ritz တီ, Thons အမ်, Fahrenkrug အက်စ်, Dahme ခ (2005) ။ ရုပ်ပုံကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလေကြောင်းလိုင်း, အသက်ရှူနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကှေ့ပုံမမှန်ခြင်း။ Psychophysiology 42, 568-578 10.1111 / j.1469-8986.2005.00312.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schienle အေ, Schafer အေ, Stark R. , ဝေါလ်တာခ, Vaitl ဃ (2005) ။ disgust- ကွောကျမကျ inducing ဓာတ်ပုံများကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuroreport 16, 277-280 10.1097 / 00001756-200502280-00015 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vrana SR, Rollock ဃ (2002) ။ လူမျိုးရေး, ကျား, မ, စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာနှင့်ဇီဝကမ္မအတွက် Contextual ကွဲပြားမှု, ဖော်ပြနှင့်ပုံရိပ်မှ Self-အစီရင်ခံစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Cogn ။ Emotion ။ 16, 165-192 10.1080 / 02699930143000185 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Whittle အက်စ်, Yucel အမ်, Yap MBH, Allen က NB (2011) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: neuroimaging ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ Biol ။ Psychol ။ 87, 319-333 10.1016 / j.biopsycho.2011.05.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wrase ဂျေ, Klein အက်စ်, Gruesser သည် SM, Hermann ဃ, Flor အိပ်ချ်, မန်းကေ, et al ။ (2003) ။ လူသားတွေအတွက်စံချိန်စံညွှန်းမီစိတ်ခံစားမှုအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ neuroscience ။ လက်တ။ 348, 41-45 10.1016 / S0304-3940 (03) 00565-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]